प्रचण्डले एनसेल र जनमुक्ति सेनाको अर्बौं पैसा खाएपछि मैले माओवादी छोडे : भट्टराई - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७५, आईतवार ०९:२६
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराईको दावी नै छ कि प्रचण्डले मात्र एनसेल प्रकरणमा २० अर्ब खाएका छन। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले आफूले माओवादी पार्टी छाड्नुको कारण त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार रहेको खुलासा गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार पनि अरू कसैले नभएर स्वयं प्रचण्डले नै गरेको भट्टराईको दावी छ । तत्कालीन माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीका लडाकुका निम्ति राज्यबाट गएको करिब २० अर्ब रकम भ्रष्टाचार गरेको डा. भट्टराईको गम्भीर आरोप छ ।
यस सम्बन्धमा प्रचण्डका तर्फबाट कुनैपनि खण्डन आएको छैन । यदि डा. भट्टराई सही थिएनन् भने प्रचण्ड कानुनी उपचारमा लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रचण्डद्वारा यसको कुनै खण्डन नहुनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । भट्टराईको अभिव्यक्तिमाथि प्रचण्डबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले यसमा ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ भनेझैँ प्रचण्डको स्वीकारोक्ति देखिएको छ ।